Thenga i-powder ye-Obeticholic Acid (459789-99-2) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / I-Obeticholic Acid powder
SKU: 459789-99-2. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ihamba kunye nekhono lokuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Obeticholic Acid powder (459789-99-2), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Obeticholic acid powder isetyenziswe ekuphatheni iPBC kubantu abadala kwaye ngamanye amaxesha kusetyenziswa kunye nezinye iziyobisi ezibizwa ngokuba yi-ursodeoxycholic acid (UDCA). I-bilangari ye-biliary ye-cholangitis (PBC) isifo esingasigxina esingasasigxina esonakalisa ubuncwane besibindi esesibindi.
Ividiyo ye-Obeticholic Acid powder
I-Obeticholic Acid powder Abalinganiswa basisiseko
igama: I-Obeticholic Acid powder
I-molecular Formula: C26H44O4
Isisindo somzimba: 420.63
I-Obeticholic Acid powder kwi-Antineoplastic Agent ukusetshenziswa
Igama loGeneric: i-Obeticholic Acid powder (oh BET i KOE id AS id)
Igama leBrama: Ocaliva
I-Obeticholic Acid powder Ukusetyenziswa
Eli gciwane lisetyenziselwa yedwa okanye ngentsebenziswano yonyango ngesifo esithile sesibindi (i-biliary cholangitis-PBC). Esi sifo sitshabalalisa i-bile ducts kwisibindi. Xa i-bile ducts ibonakaliswe, izinto ezinobungozi zingakha kwi-bile kunye ne-carcar yesibindi. I-Obeticholic Acid powder isebenza ngokubangela isibindi sakho ukuba senze ubuncwane obuncinane, kwaye ngokuncedisa i-bile ephuma esibindi. I-Obeticholic Acid powder inokunceda ukunyusa ukonakala kwe-biliary cholangitis kunye nokunciphisa iimpawu ezinjengokukhathala, isikhumba esilula, isisu esiswini, kunye nomlomo omile kunye nomlomo.
Iyiphi imilinganiselo ye-Obeticholic Acid powder
Ukusetyenzwa koMntu oseMdala kwi-Bronary Cirrhosis
I-dose yokuqala: 5 mg ngomlomo kanye ngosuku
Isondlo se-Maintenance: 5 mg ngomlomo omnye ngosuku; ukuba ukunciphisa okwaneleyo kwi-alkaline phosphatase (ALP) kunye / okanye i-bilirubin iyonke ayiphumelelanga emva kweenyanga ze-3, ukwandisa umlinganiselo kwi-10 mg ngomlomo kanye ngosuku
Umthamo omkhulu: 10 mg / ngosuku
Ukusetyenziswa: Ukunyanga kwe-biliary cholangitis:
-Asontradio kubantu abadala abakwazi ukunyamezela ursodeoxycholic acid (UDCA)
-Idibaniselwano ne-UDCA kubantu abadala abanempendulo enganeleyo kwi-UDCA
Ubunzima bomlwelwane (Child Pugh Class A): Akukho luhlengahlengiso olucetyiswayo.
Ukuxhatshazwa kwesibindi esiqinileyo (Child Pugh Class B kunye noC):
Inqanaba lomzimba: 5 mg ngomlomo ngeveki
I-dose yesondlo: 5 mg ngomlomo kanye ngeveki; ukuba ukunciphisa okwaneleyo kwi-ALP kunye / okanye i-bilirubin iyonke ayiphumelelanga emva kweenyanga ze-3, ukwandisa umlinganiselo kwi-5 mg ii-2 ngeeveki (ubuncinane iintsuku ze-3 ngaphandle), kwaye emva kwe-10 mg 2 ngamaxesha ngeveki (ubuncinane iintsuku ezingama-3 ) kuxhomekeke kwimpendulo kunye nokunyamezela
Umlinganiselo ophezulu: 10 mg / ngosuku
-Izigulane mazibekwe iliso ngenxa yesiganeko esichaphazelekayo esinxulumene nesibindi
-Iziphumo zobungozi kufuneka zilinganiswe neenzuzo kwizigulane ezineembali zempembelelo ezinxulumene nesibindi ezinxulumene nesibindi.
Izigulane ezineepuritus ezingavumiyo:
-Kongeza i-antihistamine okanye i-bile i-resin ebophayo
-Nciphisa umthamo kwi-5 mg nganye imihla (izigulane ezingahambisani nomthamo wemihla ngemihla ye-5 mg) okanye i-5 mg ngomlomo kanye ngosuku (izigulane ezingahambisani nomthamo wemihla ngemihla ye-10 mg)
-Kuyeke ukunyanga unyango ukuya kwiiveki ze-2, uze uqalise kwakhona kwiqondo eliphantsi
-Cinga ukuyeka ukugxeka kwizigulane ngokuqhubekayo okuqhubekayo, okungaxolisiyo.
Indlela i-Obeticholic Acid powder isebenza ngayo
I-Obeticholic Acid powder isetyenziswe yedwa okanye idibene ne-ursodiol (i-Actigall, i-Urso) ukuphatha i-cholangitis ye-biliary ye-biloary (PBC; uhlobo lwesifo sesibindi esibhubhisa i-bile ducts, evumela ubhedu ukuba ahlale esibindi kunye nomonakalo) kubantu abangenako uthathe i-ursodiol okanye kubantu abangazange baphathwe ngempumelelo nge-ursodiol yodwa. I-Obeticholic Acid powder eklasini yemithi ebizwa ngokuba yi-farnesoid X receptor agonists. Isebenza ngokunciphisa imveliso ye-bile kwisibindi kunye nokwandisa ukususwa kwe-bile kwisibindi.
Ngaphambi kokuba uthathe ipowder ye-Obeticholic Acid, xelela ugqirha wakho okanye ukhemisti ukuba uyayilungisa; Le mveliso inokuthi iqulethe izithako ezingasebenziyo ezinokubangela ukuphazamiseka komzimba okanye ezinye iingxaki. Thetha kwiphemistri yakho ngeenkcukacha ezingaphezulu.
Ngaphambi kokusebenzisa le mayeza, xelela ugqirha wakho okanye ikhemisti yakho imbali yakho yonyango, ngokukodwa: i-bile duct yokucima.
Ngaphambi kokuhlinzwa, xela ugqirha wakho okanye wamazinyo malunga nayo yonke imveliso oyisebenzisayo (kubandakanya iziyobisi zonyango, izidakamizwa ezingekho phantsi kweemviwo, kunye nemveliso yemveliso).
Ngexesha lokukhulelwa, eli gama kufuneka lisetyenziswe kuphela xa lifuneka ngokucacileyo. Xoxa ngengozi kunye neenzuzo kunye nogqirha wakho.
Ayaziwa ukuba le nyanga idlula ubisi lwebele. Xhumana nogqirha wakho wesondlo.
I-Obeticholic Acid powder Marketing
Ngaba i-Obeticholic Acid powder inayo nayiphi na imiphumo yangaphandle
Ukukhathala, intlungu yomlomo / yomqala, okanye ukukhawuleza kwentliziyo. Ukuba kukho nayiphi na imiphumo yokugqibela okanye iya kuba yimbi, xela ugqirha wakho okanye othemistiki ngokukhawuleza.
Khumbula ukuba ugqirha wakho usemisele le nyilisi kuba uye wafumana isigwebo sokuba inkulu kunomngcipheko weempembelelo. Abaninzi abakwenzayo le myeza abanemiphumo emibi kakhulu.
Nangona la mayeza asetyenziswa ukuphatha i-biloary cholangitis (PBC), kunokubangela ukunyuka kweempawu zesibindi. Tshela ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba unempawu ezifana nokukhwabanisa kwesikhumba okanye ukuhlanza, ukungabikho kokutya, ukunyuka kwesondlo, isisu / isisu esiswini, ukukhanya kwintsholongwane / isikhumba, umchamo omnyama, umlenze omnyama, umlenze, / iinyawo / isisu, okanye utshintsho lwengqondo / lwengqondo. Ugqirha wakho unokuyalela amanye amachiza afana ne-bile acid-binding resins okanye i-antihistamines, okanye ukuyeka okwesikhashana / ulungelelanise umthamo wakho wamayeza ukuze uncede ukulawula ezinye iziphumo. Thetha nogqirha wakho malunga nobungozi kunye neenzuzo zokuthatha eli gciwane.
Impendulo enzima kakhulu kweso siyeza ayinqabile. Nangona kunjalo, fumana uncedo lwezokwelapha olufanelekileyo xa ubona naziphi na iimpawu zentsholongwane engathintekiyo, kubandakanya: ukukhawuleza, ukuvuthwa / ukukhukhuma (ikakhulukazi ubuso / ulwimi / umqala), utywala obunzima, ukukhathazeka ngokuphefumula.
Olu alukho uluhlu olupheleleyo lweempembelelo ezikhoyo. Ukuba ubona ezinye iziphumo ezingaboniswa ngasentla, qhagamshelana nogqirha wakho okanye umasipala.
Indlela yokuthenga i-Obeticholic Acid powder esuka kwi-AASraw
I-Obeticholic Acid Raw Powder Recipes